बाढीले विद्यालय भवन बगायो, बेनी बजार जोखिममा ! - बाढीले विद्यालय भवन बगायो, बेनी बजार जोखिममा !
बाढीले विद्यालय भवन बगायो, बेनी बजार जोखिममा !
२०७५, २८ भदौ, 02:21:43 AM
सदरमुकाम बेनी बजार संरक्षणका लागि कालीगण्डकी नदीको किनारमा निर्माणाधिन पक्की पर्खाल बाढीले बगाएको प्रजिअ लिलाधर अधिकारीले जानकारी दिए । करिब पचास मिटर पक्की पर्खाल बगाएर बस्तीतर्फ कटान गर्न थालेपछि बेनी बजार उच्च जोखिममा परेको हो । यसैगरी उक्त गाउँपालिका ३ राहुघाटको बस्ती र बेनी जोमसोम सडक अन्तर्गतको बेलिब्रिज कटानको जोखिममा परेको छ ।